မူပိုင်ခွင့် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
MCN (မြန်မာကေဘယ်ရုပ်သံသတင်းဌာန) သည် အင်တာနက်စနစ်အား အသုံးပြုလျှက်၊ အွန်လိုင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင် အခကြေးငွေ တစုံတရာ ရယူခြင်းမရှိသည့် အွန်လိုင်းလူထု ဝန်ဆောင်မှု ရုပ်သံမီဒီယာ OPSM (Online Public Service Media) အဖြစ်ရပ်တည်လျှက် ဘက်လိုက်မှု ကင်းသည့်၊ မျှတသည့်၊ ထင်သာမြင်သာရှိသည့်၊ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် သတင်းပညာအား တန်ဘိုးထား သည့် ရုပ်သံသတင်းနှင့် ဆက်စပ်အစီအစဉ်များအား အဓိကထားလျှက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ထုတ်လုပ်တင်ဆက် လျှက်ရှိပါသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် MCN (မြန်မာကေဘယ်ရုပ်သံသတင်းဌာန) ၏ ရုပ်သံသတင်းနှင့် ဆက်စပ်အစီအစဉ်များမှ ဗွီဒီယိုအပါဝင်၊ ရုပ်သေ၊ ရုပ်ရှင်၊ အသံနှင့် အကြောင်းအရာများအား ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်းမရှိပဲ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ကိုးကား၍ ဖြစ်စေ အခကြေးငွေတစုံတရာကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊
သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရယူလျှက် ထုတ်လွှင့်၊ ထုတ်ဝေ၊ ဖြန်ချိ၊ လွှတ်တင်၊ ရောင်းချလျှက်သည်ကို တွေ့ရှိ နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့သတင်းဌာန၏ ရုပ်သံသတင်းနှင့် ဆက်စပ်အစီအစဉ်များမှ အကြောင်းအရာများအား အခကြေးငွေတစုံတရာ ရယူခြင်းမရှိပဲ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ကိုးကား၍ ဖြစ်စေ ထုတ်လွှင့်၊ ထုတ်ဝေ၊ ဖြန်ချိ၊ လွှတ်တင်သူများ အနေဖြင့် ခွင့်ပြုချက်တောင်းယူပြီးမှသာ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ကိုးကား၍ဖြစ်စေ ဖော်ပြကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင် မိမိတို့ ရုပ်သံသတင်းဌာန၏ ရုပ်သံသတင်းနှင့် ဆက်စပ်အစီအစဉ်များမှ အကြောင်းအရာ များအား အခကြေးငွေတစုံတရာကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရယူပြီး တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ကိုးကား၍ ဖြစ်စေ ထုတ်လွှင့်၊ ထုတ်ဝေ၊ ဖြန်ချိ၊ လွှတ်တင်၊ ရောင်းချမှုများအား တွေ့ရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာလိုက်သည်။
No (173/175), Room (604) R, Pansodan Tower,
Pansodan Road (Middle), Kyauktadar Township,
Phone: +95936084960
Email: newsroom.mcn@gmail.com, tvnews.mcn@gmail.com, newsroom@mcntv.biz
Freddy Whittemore 15 February, 2020 At 5:40 AM
Tresa Kling 25 February, 2020 At 12:20 AM
Umer Ishfaq9March, 2020 At 9:40 PM
بروكسي 19 March, 2020 At 7:28 PM
Lanny Lemos3April, 2020 At 11:24 PM
Please, bookmark the ShoulderPosture webpage if you’re interested but can’t makeapurchase right away: shoulderposture.com
Samara Grammer4April, 2020 At 3:13 PM
Norma Toups5April, 2020 At 6:40 AM
ATTN: mcntv.biz / မူပိုင်ခွင့် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS) INTERNET SITE SERVICES
This notice RUNS OUT ON: Apr 04, 2020
Junior Borges 16 May, 2020 At 1:20 PM
Here is your quotation regarding the SEO Ultimate plan that you inquired about for mcntv.biz.
온라인카지노 20 July, 2020 At 10:35 AM
카지노사이트 20 July, 2020 At 10:56 AM
바카라사이트 20 July, 2020 At 11:06 AM
Dyan Bracegirdle 23 August, 2020 At 12:40 AM
Get approved in the GOOGLE News for mcntv.biz and start getting the traffic and visibility that you need.
Jung Carnegie 8 October, 2020 At 10:18 PM
chemnesia strain review 10 October, 2020 At 5:10 AM
Hello there! This post couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will send this post to him. Fairly certain he’s going to haveagreat read. I appreciate you for sharing!
야동사이트 15 October, 2020 At 5:25 PM
웹툰사이트 19 November, 2020 At 3:25 PM
Emerson Bannan 16 February, 2021 At 2:56 PM
Giselle Pomeroy9March, 2021 At 1:06 AM